घरमा सिसिटिभी राख्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ ? पुरानो स्मार्टफोनलाई यसरी सिसिटिभी क्यामरा बनाउनुस् - Technology Khabar
» घरमा सिसिटिभी राख्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ ? पुरानो स्मार्टफोनलाई यसरी सिसिटिभी क्यामरा बनाउनुस्
Technology Khabar ११ जेष्ठ २०७७, आईतवार
आजको परिवर्तित समयमा टेक्नोलोजीले हाम्रो प्रत्येक कार्य सजिलो बनाईदिएको छ । स्मार्टफोनको बढ्दोप्रयोगसँगै यस टेक्नोलोजीको माध्यमबाट तपाईले आफ्नो स्मार्टफोन केबल कल गर्नका लागि मात्र नभई क्यामरा, स्क्यानिंग जस्ता धेरै कार्यहरूको लागि पनि प्रयोग गर्नसक्नु हुन्छ।
यति मात्र होईन, यदि तपाईंसँग पुरानो स्मार्टफोन छ भने तपाईँ यसलाई आफ्नो घरको सुरक्षाको लागि सेक्यूरिटी क्यामरा बनाएर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।
तपाई आफ्नो घर वा अफिसको हेरचाह गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईको अर्को स्मार्टफोनको माध्यमबाट विश्वको कुनै पनि कुनामा त्यसलाई हेर्न सक्नुहुनेछ । यसको लागि तपाईले पैसा खर्च गर्नु पर्दैन र प्राविधिकलाई कल पनि गर्नु पर्दैन।
हामी तपाईंलाई यहाँ केहि सजिलो विधिहरूको बारेमा बताउन जाँदैछौं, जुन सहयोगका साथ तपाईं आफ्नो फोनलाई सीसीटीभी क्यामरा जस्तै प्रयोग गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
तपाईंलाई स्मार्टफोनको आवश्यक पर्दछ । तपाईँसग भएका कुनैपनि एन्ड्रोयड वा आईफोनलाई यसमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ । तर यो ध्यानमा राख्नु महत्वपूर्ण छ कि फोन पुरानो भएपनि काम गरिरहेको हुनुपर्छ । फोनलाई सीसीटीभी क्यामरा बनाउनका लागि तपाईले केहि चीजहरूको पनि हेरचाह गर्नु पर्छ । जस्तै फोनको ब्याट्रीले कति लामो समयसम्म काम गर्दछ र कहिले फोन चार्ज हुन्छ । यस बाहेक, तपाईले यो पनि हेर्नु पर्छ कि तपाईको फोनमा वाईफाई चल्छ की चल्दैन वा फोनको वाईफाई सिग्नल कस्तो देखाउँछ । साथै, यो जाँच गर्नुपर्नेछ कि फोनको भिडियो स्ट्रिमिंगले कसरी काम गरिरहेको छ । यदि उल्लेखित यी तीन मध्ये कुनै पनि कुराले तपाईंको फोनमा काम गर्दैन भने तपाईं आफ्नो फोन सीसीटीभी जस्तै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
तपाईको फोनको वाईफाई खोल्नुहोस् र प्ले स्टोर वा एप स्टोरमा जानुहोस् र त्यहाँ विभिन्न किसिमका सेक्यूरिटी एप अर्थात सिसिटिभी एप भेट्नुहुनेछ । कति एप त मालवेयर भएका देखिन्छन भने कुनै एप निश्चित स्मार्टफोनमा मात्र काम गर्दछन् । कुनै कुनै त नक्कली सिसिटिभी एप समेत भेटिन्छन् । यी एप्स अधिकांश निशुल्क प्रयोग गर्न सकिन्छ भने थप सुबिधा लिनुपरेमा प्रिमियर फीचर किन्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यहाँ एटहोम भिडियो स्ट्रिमर एप, होम सेक्युरिटी क्यामरा-अल्फ्रेड एटहोम, डिआईवाई सिसिटिभी क्यामरा होम सेक्यूरिटी एप लगायतका सयौं एपहरु उपलब्ध छन् । यसमध्ये एट होम नामक डाउनलोड गर्नुहोस्। यो एप १० लाख प्रयोगकर्ताहरुद्वारा डाउनलोड गरिएको छ।
डाउनलोड गरेपछि तपाईंको फोन भिडियो स्ट्रिमिङ्गको लागि प्रयोग हुनेछ । र यो फोनले सिसिटिभीको रूपमा कार्य गर्दछ।
फोनलाई एक स्थानमा फिक्स गर्नुहोस् जहाँ तपाईं यसलाई चार्जरमा राम्रोसँग जडान गर्न सक्नुहुनेछ र नियमितरुपमा फोन चार्ज हुनेछ किनकी तपाईं रेकर्डिंग भईरहेको बेलामा ब्याट्री चार्ज सकिएको हेर्न चाहनुहुन्न। सो फोनलाई अब आवश्यक स्थानमा फिक्स गर्नुहोस् ।
तपाईंलाई भिडियो फिड प्ले गर्नको लागि दोस्रो स्मार्टफोन वा ट्याब्लेटको पनि आवश्यक पर्दछ जून तपाईँले नियमित प्रयोग गरिरहेको भएपनि हुन्छ । वा तपाईँ आफ्नो विन्डोज पीसीमा भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अब फोनमा एटहोम मोनिटर एप डाउनलोड गर्नुहोस् जहाँ तपाईं सीसीटीभी भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ ।
अब दुबै उपकरणहरू कनेक्ट गर्न तपाईंले डाउनलोड गरिएको एप खोल्नु पर्छ। एपले तपाईंलाई प्रयोगकर्ताको नाम, पासवर्ड र अनलाइन कनेक्सनमार्फत एक यूनिक कनेक्सन आईडी दिनेछ । यी जानकारीहरुलाई भिडियो हेर्ने मोबाइलको एपमा राख्नुहोस्।
भिडियो हेर्नका लागि प्रयोग गरिने फोनमा मोनिटर एप खोल्नुहोस । यस पछि त्यसमा खाता विवरण हाल्नुहोस् र ‘एड अ फिड’ मा क्लिक गर्नुहोस् पहिले सिर्जना गरिएको क्यूआर कोड पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ।
कोड स्क्यान गर्नुहोस् र अब तपाईंको सिसिटिभी स्ट्रीमर र रिसीभर दुबैले काम गर्न सुरू गर्दछ।
यति प्रक्रियापछि तपाईं आफ्नो पुरानो फोनलाई सिसिटिभी क्यामराको रुपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ । अब तपाईँ घर वा कार्यालयमा पुराना स्मार्टफोनबाटै अनुगमन गर्न सक्नुहुनेछ ।